Akụkọ - Ọgwụgwọ Co2 Laser Fractional vs. Fractional Erbium Laser Resurfacing
Mkpokọta CO2 Laser Resurfacing
Otú o si arụ ọrụ: Akụkụ carbon dioxide (CO2) nke na-ewepụta laser na-eji ọkụ infrared ewepụtara site na tube jupụtara carbon dioxide iji mepụta ọnya microthermal na anụ ahụ ezubere iche. Ka ọkụ na-etinye ahụ, anụ ahụ na-ekpo ọkụ, na-eduga na mwepụ nke mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ meworo agadi na nke mebiri emebi site na mpụga nke ebe a na-emeso ya. Mmebi ahụ na-ekpo ọkụ nke laser kpatara na-ejikọkwa collagen dị ugbu a, nke na-eme ka akpụkpọ ahụ dị elu ma na-eme ka mmepụta nke collagen ọhụrụ n'akụkụ akụkụ dị elu na mmegharị ahụ ike.
Uru na ọghọm: Ọ bụ ezie na-abụghị nke ogwugwo, usoro ọgwụgwọ a na-emerụ ahụ karịa ọtụtụ ọgwụgwọ anụ ahụ ndị ọzọ na-emegharị ahụ, nke nwere ike ịtụgharị gaa nsonaazụ ndị ọzọ. N'ikwu ya, eziokwu ahụ bụ na ọ na-emerụ ahụ pụtakwara na ịmụrụ mmadụ anya ma ọ bụ zuru ezu nwere ike ịdị mkpa maka nkasi obi nke ndị ọrịa na oge ọgwụgwọ na-adịkarị n'etiti 60 ruo 90 nkeji. Akpụkpọ ahụ ga-acha ọbara ọbara ma kpoo ọkụ ruo aka, ma ọ dịkarịa ala otu izu ezumike na-atụ anya.
Contraindications: E nwere ọtụtụ contraindications dị ka ọkọlọtọ na mpaghara ọgwụgwọ achọrọ. Tụkwasị na nke a, ndị ọrịa jiri isotretinoin mee ihe n'ime ọnwa isii gara aga kwesịrị ichere ka a gwọọ ha. A naghị atụ aro CO2 laser resurfacing maka ụdị anụ ahụ gbara ọchịchịrị.
Otú o si arụ ọrụ: Erbium, ma ọ bụ YAG, lasers na-eji ọkụ infrared ewepụta ike ọkụ dị n'okpuru anụ ahụ. Ntughari erbium laser nke na -emepụta obere microthermal patches (mmerụ ahụ) na dermis, akwa oyi akwa nke anụ ahụ, na-emebi collagen na sel akpụkpọ anụ meworo agadi ma na-eme ka mmepụta nke collagen ọhụrụ na ahụike ọhụrụ sel. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, usoro ọgwụgwọ a na-arụ ụdị alụlụ anụ ahụ na-achịkwa iji gwọọ ma gwọọ anụ ahụ mebiri emebi maka mmelite nke anụ ahụ, ụda ya, na agbanwe ya.
Uru na ọghọm: Usoro ọgwụgwọ erbium nke fractional dị mma maka ndị ọrịa toro eto, ebe ọ bụ na, ma e jiri ya tụnyere microneedling, ha na-eleba anụ ahụ dị omimi n'okpuru ala maka mmelite dị elu na mmepụta nke collagen. Agbanyeghị, enweghị usoro nduzi siri ike iji chọpụta onye nwere ike ịbụ obere maka ọgwụgwọ ndị a. Usoro ọgwụgwọ a chọkwara nnukwu oge na ịcha ọbara ọbara na-adịgide adịgide ruo ọtụtụ ụbọchị. Usoro ọgwụgwọ laser dị na Erbium adịghị mma maka agba akpụkpọ anụ n'ihi nnukwu ihe ọghọm.
Contraindications: Ebe ọ bụ na laser na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọkụ, enwere mmetụta ndị ọzọ a ga-atụle, gụnyere nchegbu gbasara hyperpigmentation post-inflammatory, n'akụkụ ogologo oge na nlekọta ọgwụgwọ.